दिल्लीलाई फाइनलमा पुर्याएका चार नायक | Hamro Khelkud
दिल्लीलाई फाइनलमा पुर्याएका चार नायक
एजेन्सी – दिल्ली क्यापिटल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
आइतबार राती सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्लीले सनराइजर्स हैदराबादलाई १७ रनले पराजित गर्दै आइपिएल इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो । सन् २००८ देखि नियमित आइपिएलमा सहभागिता जनाउँदै आएपनि दिल्लीले यसअघि क्वालिफायर र सेमिफाइनल सम्म मात्रै स्थान बनाउन सकेको थियो ।
दिल्लीले उपाधिको लागि मंगलबार फाइनलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग दुबई इन्टनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा खेल्ने छ । जितका लागि १ सय ९० रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १ सय ७२ रनमा समेटिएको थियो ।
त्यसअघि टस जितेर शेख जायद स्टेडियम आबूधाबीमा पहिला ब्याटिङ रोजेको दिल्लीले ३ विकेटको क्षतिमा १ सय ८९ रन बनाएको थियो । लिग चरणका दुबै खेलमा हैदराबादसँग पराजित भएको दिल्लीले दोस्रो क्वालिफायरमा जित हातपार्न ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा सुधारिएको प्रर्दशन गरेको थियो ।
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हैदराबादका केन विलियम्सनले ४५ बलमा ६७ र अब्दुल सामदले १६ बलमा ३३ रन जोडेपनि जित दिलाउन सकेनन् । दिल्लीलाई ऐतिहासिक फाइनलमा पुर्याउन बल र ब्याट दुबैबाट उत्कृष्ट योगदान दिएका अष्ट्रेलिया अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिस खेलमा ‘प्लेयर अफ द म्याच’ चुनिए । हैदराबादलाई हराउँदै दिल्लीलाई ऐतिहासिक फाइनलमा पुर्याउन नायक बनेका दिल्लीका ४ खेलाडी र तिनीहरुको प्रर्दशन यस प्रकार रह्यो ।
४. शिम्रन हेटमायर
यसअघि दुई खेलमा बेन्चमा बसेका वेस्टइन्डिजका आक्रामक युवा ब्याट्सम्यान शिम्रन हेटमायरले दिल्लीलाई बलियो योगफलमा पुर्याउन तल्लोक्रममा राम्रो योगदान दिएका थिए । विकेटकिपर ऋषभ पन्त र अजिंक्या रहाणे भन्दा अगाडि ब्याटिङका लागि मैदान छिरेका हेटमायरले २२ बलमा ४ चौका र १ छक्का गरि ४२ रन जोड्दै दिल्लीलाई बलियो अवस्थामा पुर्याएका थिए । हेटमायरको आक्रामक इनिङको सहयोगमा दिल्लीले बलियो योगफल बनाउँन सफल भयो । जसले गर्दा बलरहरुलाई प्रर्दशन गर्न सहज पनि बनेको थियो ।
३. शिखर धवन
दिल्लीको जितमा ओपनर शिखर धवनको योगदान पनि महत्वपूर्ण रह्यो । यसअघि कमजोर सुरुवात गरि रहेको दिल्लीले ओपनिङ धवन र मार्कस स्टोइनिसका साथ गराएको थियो । यी दुई ओपनरले ८.२ ओभरमा ८९ रन जोड्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए । धवन १९ औं ओभर सम्म टिक्दै दिल्लीलाई सुरक्षित योगफलमा पुर्याएका थिए ।
धवनले ५० बलमा २ छक्का र ६ चौका सहित ७८ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिए । धवन क्रिजमा रहँदा हेटमायरलाई आक्रामक ब्याटिङ गर्न पनि बिना दबाब सहज बनेको थियो । धवनले उक्त इनिङ नखेलेको भए सायद दिल्लीको पहिलो पटक फाइनलमा पुग्ने सपना अधुरै बन्न सक्थ्यो ।
प्रमुख हतियार तीव्र गतिका बलर कागिसो रबाडाले दिल्लीलाई फाइनलमा पुर्याउन बलिङमा उत्कृष्ट योगदान दिए । उनले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै हैदराबादका प्रमुख ब्याट्सम्यान डेभिड वार्नरलाई २ रनमा बोल्ड आउट गर्दै दबाब कायम गरेका थिए । दिल्लीलाई वार्नरको विकेट निकै महत्वपूर्ण थियो । हैदराबाद वार्नरको ब्याटिङमा धेरै निर्भर थियो ।
वार्नर आउट भएपनि केन विलियम्सन र अब्दुल सामदले उच्च प्रर्दशन गर्दै अन्त्यमा हैदराबादले जितको आशा देखाएका थिए । हैदराबादलाई अन्तिम १२ बलमा ३० रन जितको लागि आवश्यक थियो । तर रबाडाले १९ औं ओभरमा तीन विकेट लिदै ८ रन खर्चेपछि दिल्लीको जित सहज बनेको थियो । समग्रमा रबाडाले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए ।
१. मार्कस स्टोइनिस
दिल्लीलाई फाइनलमा पुर्याउन मार्कस स्टोइनिसले ब्याट र बल दुबैमा उच्च प्रर्दशन गरे । सुरुवातमा धवनसँग उत्कृष्ट साझेदारी गर्नेक्रममा स्टोइनिसले २७ बलमा ३८ रन जोडेका थिए । बलिङतर्फ स्टोइनिसले ३ ओभरमा २६ रन खर्चेर प्रमुख तीन विकेट लिए । एक समय विलियम्सनले हैदराबादको जितको सम्भावना देखाउँदै दिल्लीलाई दबाबमा राखेका थिए ।
तर स्टोइनसिले १७ औं ओभरमा विलियम्सनलाई रबाडाबाट क्याच गराएपछि दिल्लीको जित पक्का बनेको थियो । स्टोइनिसनै खेलमा ‘प्लेयर अफ द म्याच’ चुनिए र उनीनै उक्त अवार्डको प्रमुख हकदार थिए ।